High-Quality Safety ụdị nti nsogbu IV catheter ụlọ ọrụ na-emepụta | Sanxin
Safety ụdị nti mgbali IV catheter
Onye na-ejikọ eriri na-enweghị agịga nwere ọrụ na-aga n'ihu kama ntuziaka akara nrụgide dị mma, na-egbochi okeghachi ọbara, na-ebelata mgbochi catheter na igbochi nsogbu infusion dị ka phlebitis.
Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd bụ mba elu-tech enterprise ọkachamara na ngwaọrụ ahụike R&D, n'ichepụta, ahịa na ọrụ. Mgbe ihe karịrị afọ 20 nke nchịkọta, ụlọ ọrụ ahụ nwere echiche zuru ụwa ọnụ, na-agbaso usoro atụmatụ mmepe mba, na-agbaso mkpa nlekọta ahụike, na-adabere na usoro njikwa mma na R&D tozuru etozu na uru nrụpụta, Sanxin ebutewo ụzọ na ụlọ ọrụ ahụ ịgafe usoro CE na CMD mma Management.
◆ Njikọ nrụgide na-enweghị agịga na-enweghị ọrụ nwere arụmọrụ na-aga n'ihu kama ntuziaka akara nrụgide dị mma, na-egbochi okeghachi ọbara, na-ebelata mgbochi catheter na igbochi nsogbu infusion dị ka phlebitis.
Device Ngwa mkpuchi mkpuchi agịga dị iche iche na-eme ka o doo anya na a na-eweghachi eriri eriri ahụ n'ime okpu mkpuchi mgbe ọkpọ ahụ gara nke ọma, na-egbochi ndị ọrụ ahụike ka agịga ahụ mebie ya na mberede wee zere ọrịa na-ebute ọrịa.
Dị na nkọwa:
Nkọwapụta: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G na 26G
Nke gara aga: Ngwa obi na-edozi ihe na-eme ka a ghara iji ya mee ihe
Osote: Sirinji Sterile maka iji otu
Iv Catheter sdị
Iv Catheter agịga
Catdị Catheter Iv
Iv catheters maka ire ere
Typedị IV catheter
Ngwunye catheter nke dị na Central
Positive mgbali IV catheter
Central venous catheter mkpọ (maka dialysis)
Emechi IV catheter
Kwụ Ọtọ IV catheter